Vaovao - hazavao ny andraikitra, manatanjaha andraikitra, ary mamorona tombony
Ny fanombanana ny fahombiazan'ny atrikasa tsirairay dia iray amin'ireo fepetra raisin'orinasa ary andrana lehibe amin'ny fanavaozana ny karaman'ny orinasa. Io no fomba tokana hampihenana ny fandaniana amin'ny fomba mahomby sy hanatsarana ny fifaninanana eo amin'ny orinasa. Ny vidin'ny akora dia nitombo be, ary ny famatsiana herinaratra sy ny tsy fahampian'ny rano dia nanohitra mafy ny orinasa. Tokony hanapa-kevitra isika fa hanao asa tsara amin'ny fanombanana ny fahombiazan'ny atrikasa ary hampitombo ny fahombiazan'ny atrikasa mba hivoahan'ny orinasa. Mametraka tanjona telo ny drafitra fanombanana: tanjona fototra, tanjona kendrena ary tanjona kendrena. Isaky ny tanjona kendrena dia mitentina 50% ireo mari-pahaizana ambaratonga voalohany toa ny vokatra, ny vidiny ary ny tombom-barotra ary ny tanjon'ny fitantanana toa ny kalitao, ny famokarana azo antoka, ny fanovana teknolojia ary ny famokarana madio 50%. Rehefa tapitra ny tanjona dia angatahina ireo talen'ny atrikasa hiasa mafy.
Ho an'ireo orinasa hivoatra amin'ny fotoana maharitra, dia tsy maintsy mampihatra ny fahaiza-manao anatiny izy ireo, mijery akaiky ny fitantanana, ary manome lanja mitovy amin'ny vokatra sy ny kalitao. Ny fitambaran'izy roa dia tsy azo hitongilana. Ny talen'ny atrikasa rehetra dia tokony hanao izany amin'ny fiheverana tsara, handray ny fanombanana isaky ny fanombanana, hanaiky ny fitsapana ny orinasa ary hametraka rafitra fanonerana mifantoka amin'ny fahombiazana.
Ny fanombatombanana fampisehoana isan-taona an'ny talen'ny atrikasa dia vondrona kaonty kely izay manambatra ny fanombanana ny fitsaboana sy ny fanatanterahana mba hampisehoana mazava kokoa ny asan'ny talen'ny atrikasa sy ny tombony mivantana, mba hampitomboana ny hafanam-po amin'ny asa sy ny fahombiazan'ny orinasa Manantena aho fa amin'ny fanatsarana hatrany ny rafitra fanombanana ny fahombiazana dia afaka mahazo antoka isika fa tanteraka tsara ny tanjon'ity taona ity. Antenaina fa ny talen'ny atrikasa dia afaka mampiasa tsara ny loharanon'ny mpitarika ny ekipa sy ny mpiasa ary miasa mafy mba hamoronana toe-javatra vaovao amin'ny asa.